Ekoadaoro: Voatsikera nandritra ny nanaovany fitsidihana an’i Eoropa ny Filoha Correa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2018 4:04 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Correa tao anatin'ny diabe feno olona tao Guayquil nandritra ny 19 Janoary 2008 – Sary avy amin'i Charlie Perez, lisansa Creative Commons.
Niteraka tsikera teo amin'ny fampahalalam-baovao sy ny bilaogera Ekoadaoreana, ary koa ireo mpikambana ao amin'ny Antenimieram-panorenana izany fihetsika tsy matihanina izany. Dionicio Cando [es], mpikambana ao amin'ny Antenimieram-panorenana ao amin'ny faritany Morona Santiago manondro lahatsoratra iray nosoratan'ilay mpanao gazety malaza Ekoadaoreana Carlos Vera, izay manontany hoe iza no hanagadra an'i Correa noho ny fanevatevana mpifindra monina tahaka izany:
La Alharaca [es], bilaogy avy ao Guayaquil manoratra fa niresaka momba ny fifindra-monina nandritra ny fitsidihana an'i Madrid, Bruxelles sy Frantsa i Correa ary nangataka fa tsy tokony ho melohina ny fifindra-monina. Na dia izany aza, niditra ihany koa ny lohahevitra Kolombia raha nanakiana ny fomba fijerin'i Correa anti-Kolombiana ny mpianatra Kolombiana iray.
Olana iray monja nampisy fiantraikany amin'ny lazan'i Correa ihany izany. Nitsambikina niala ny sambo ny Konfederasionan'ny Tompotany ao Ekoadaoro (CONAIE) ka manohitra an'i Correa ankehitriny noho ny “fanohizana ny politika ara-tsosialy manavakavaka sy politika ara-toekarena neo-liberaly elatra havanana.” Ankoatra izany, ny solosaina finday hita teo anatrehan'i Raúl Reyes, mpitarika ady anaty akatan'ny FARC izay maty nisy namono tay amin'ny sisintany iadivana no nampiseho ny fifandraisana teo amin'i Correa sy ilay vondrona. Na dia izany aza, nilaza i Correa fa hametra-pialàna izy raha voaporofo fa nanohana ny FARC havia ny governemantany.